निर्वाचित भएपछि गाउँ र नगरका पदाधिकारीहरुको पाउनेछन् यस्तो तलबसुविधा ! हेर्नुहोस् कसले कति पाउँछन् ?
ARCHIVE, SPECIAL » निर्वाचित भएपछि गाउँ र नगरका पदाधिकारीहरुको पाउनेछन् यस्तो तलबसुविधा ! हेर्नुहोस् कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडौँ - यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोलले देश नै तातेको छ । निर्वाचित हुनका लागि कुनै कसुर उम्मेदवारहरुले राखेका छैनन् । यसैबीच ती निर्वाचित उम्मेदवारहरुले कति तलव पाउँलान्, वा के के सुविधा पाउँलान् भन्ने धेरैको गुनासो हुन सक्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पधाधिकारीहरुले १५ हजारदेखि ६० हजारसम्म तलव सुविधा पाउनेछन् भने अरु सरकारी सुविधासमेत पाउनेछन् । सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुको तलब तथा सुविधा तोकेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । यसैगरी उपप्रमुखले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । वडाध्यक्षको तलव भने मासिक ३० हजार रुपैयाँ हुनेछ ।
त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार तलव तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् भने, उपप्रमुखको तलव २५ हजार र वडाध्यक्षको तलव २० हजार रुपैयाँ हुनेछ । गाउँपालिकाका प्रमुखको तलव २५ हजार हुनेछ भने उपप्रमुखको तलव २० हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षको १५ हजार हुनेछ । यस अतिरिक्त्त प्रत्येक बैठक बसेवापत बैठक भत्ता १ हजार सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
प्रकाशित : Saturday, May 06, 2017
हाइवेका होटलहरुमा खुलेआम यौन व्यापार : ड्राइभरलाई 'फ्री सर्भिस' अरुलाई मात्र १०० रुपैयाँ, प्रशासन मौन !
सानिमा बैंकको अर्को दादागिरी : पैसाको लोभ देखाएर विद्यालय भवनमा बैंकको साखा, विद्यार्थी टहरामा पढ्न बाध्य !